Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Mareykanka ayaa kaalinta koowaad ka galay qiimeynta baasaboorka adduunka cusub
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Mareykanka ayaa kaalinta koowaad ka galay qiimeynta baasaboorka adduunka cusub.
Isaga oo si fiican u dhaliyey Maalgashiga, Tayada Nolosha iyo Tusaha Dhaqdhaqaaqa Hagaajiyay, USA waxay fadhisaa meesha ugu sareysa miiska, laakiin kuma aysan guuleysan hal Tusaal.
Mareykanka wuxuu galay kaalinta 10aad ee Tusaha Mobility, 4aad ee Tusaha Maalgashiga, iyo 23aad ee Tusaha Tayada Nolosha.
Haddii aad doorato Dhaqdhaqaaqa Hagaajinta iyo Tusayaasha Maalgashiga, labaduba waxaa kor u qaadi doona Singapore.
Dalka ugu sarreeya Tusaha Nolosha Tayada waa Iswiidhan.
Heerarka baasaboorka ee hore waa la jebiyey. Helitaanka dal, fiiso la’aan, dabcan waa muhiim, laakiin miyeysan habboonayn tayada nolosha, shaqada, xuquuqda aadanaha iyo waxyaabo kale oo badan markaan liis-gareyneyno baasaboorada adduunka ugu fiican?
Wasiirka Arrimaha Dibedda Riad Maliki ee Dawladda Falastiin iyo Arrimaha Dibedda Mark Brantley oo ka tirsan St Kitts iyo Nevis ayaa saxiixay heshiis ka-dhaafitaan fiiso la’aan ah sannad-guurada 60-aad ee Dhaqdhaqaaqa Aan Is-waafaqsanayn ee Serbia toddobaadkan.
Khubarada safarka ayaa dib u qiimeeyay kumanaan ilaha xogta ah, iyagoo isu soo jiidaya xogta muhiimka ah, oo ay ku jirto helitaanka fiisaha bilaashka ah, laakiin ku darista dhaqdhaqaaqa, fursadda maalgashiga iyo tayada nolosha ee ay bixiso meel kasta oo lagu galo tusmo cusub, oo ah mid nolosha ku saleysan darajooyinkii hore. Xaqa marinka fiiso-la'aanta ah waa qayb ka mid ah qiimaha meel kasta oo la siiyo, Tusahan Baasaboorku wuxuu iswaafajiyaa xogta oo waddammada u darajinayaa hab dhammaystiran.
Diiwaangelinta falanqeeyayaasha tirada leh ee leh waayo-aragnimo ballaaran ee ururada caalamiga ah, falanqaynta mashaariicda xogta waaweyn ee sida UNESCO, OECD, iyo Bangiga Horumarinta ee Ameerika, Tusaha Baasaboorka Caalamiga ah wuxuu soo bandhigayaa hab cusub oo lagu cabbirayo soo jiidashada guud ee waddan kasta ee dib-u-dejinta, maalgashiga, ama ujeedooyin laba dhalasho ah iyada oo loo marayo saddex tilmaamood oo kaligood taagan: Tusaha Dhaqdhaqaaqa Hagaajiyay, Tusaha Maalgashiga, iyo Tusaha Tayada Nolosha.
Tilmaame kastaa wuxuu awood u siiyaa adeegsadayaasha inay shaandheeyaan natiijooyinka qiimeynta waddan ee shaqsiyeed, iyagoo adeegsanaya 11 tilmaame oo kala duwan oo ka yimid ilo sumcad leh sida Forum Dhaqaalaha Adduunka, Gallup, iyo Xarunta Yale ee Sharciga iyo Siyaasadda Deegaanka.
10 -ka baasaboor ee ugu sarreeya ee lagu qiimeeyay Tusaha Baasaboorka Adduunka ayaa kala ah:
Mareykanka wuxuu galay kaalinta 10aad ee Tusaha Dhaqdhaqaaqa, 4aad ee Tusaha Maalgashiga, iyo 23aad ee Tusaha Tayada Nolosha. Tilmaame kasta wuxuu culeyskiisu yahay 50% (Mobility) 25% (Investment) 25% (Tayada Nolosha) iyo wadarta guud ee 96,4, Baasaboorka Caalamiga ah wuxuu ku qiimeeyay USA booska ugu sarreeya.